Namily lalana tamin’ny fomba tsy ara-dalàna zotran’ny fampiasa Telegram ny orinasam-pifandraisandavitra ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 5:58 GMT
Sary namboarin'i Tetyana Lokot. Soratra nataon'i stephan salt ho an'ny Noun Project.
Eto ambany ny endrika nasiam-panovana tamin'ny lahatsoratra iray nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao Iran.
Tao anatin'ny adiny iray, novaina ny lalana na ny adiresy arofenitra aterineton'(ip)ny Telegram ka lasa nankany amin'ny lohamilin'ny TCI fa tsy ny lohamilin'ny Telegram ny zotram-pifandraisan'ny mpisera. Nahatonga ny fampiasa (app) ho tsy azo ampiasaina izany, eny fa na dia nampiasa ny fitaovana fanivahan-tsivana tahaka ny VPNs aza ny mpisera.
Inona ny ataon'ny border gateway protocol?
Ahafahan'ny routers aterineto mifankahita ny arofenitra BGP. Ohatra, raha te-hiditra amin'ny fampiasa Telegram ianao, ny lalambe tsara indrindra ho an'ny lohamilin'ny fampiasa dia hofaritan'ny routers izay mampifandray anao amin'ny adiresy IP voatahiriny, izay lasa nohavaozina rehefa misy ny fiovana. Avy amin'izany no ahafahan'ny BGP mamela ny routers hifanakalo torohay amin'ny fomba tsara indrindra ahafahan'ny mpisera miditra any amin'izay tiany aleha.
Raha niresaka tamin'ny Foiben'ny Zon'olombelona ao Iran (CHRI), nanazava ny manampahaizana manokana momba ny aterineto, Hamid Kashfi, fa izao karazana “hijacking” (fisovohana) izao dia tahaka ny manova ny adiresin'ny tranonao mba handraisana ny taratasin'olon-kafa. Nohazavaina fa nampiasaina tamin'io ny fomba “border gateway protocols” (BGPs), izay ahafahan'ny routers hahita iray hafa.
“Rehefa tsy afa-miditra mivantana ao amin'ny tambajotra kinendry iray ao amin'ny firenena iray ianao, ny fomba tsotra indrindra hifehezana ny zotrany dia ny fijirihana ny lahatahirin'aterineto amin'ny alalan'ny BGPs,” hoy i Kashfi tamin'ny CHRI.
Tsy vao sambany i Iran no nivoaka tamin'ny ara-dalàna toy izao hanitarana ny politikam-panivanany. Saingy mety hanana fiantraikany manerantany ilay hetsika tamin'ity indray mitoraka ity. Tamin'ny fanimbana ny zotram-pifandraisan'ny Telegram, dia mety niteraka fanavaozana indray ny zotram-pifandraisan'ny lohamilina hafa eto amin'izao tontolo izao ny nataon'i Iran. Mety hiafara amin'ny fisian'ny adiresy IP tsy izy maro izay mety hanapaka ny zotran'aterineto any amin'ny firenen-kafa ihany koa ny toy izao.
Naneho hevitra tamin'ny fivoaran-draharaha, nisioka tamin'ny 30 jolay ny mpitatitra ara-teknolojian'ny Washington Post, Drew Fitzgerald:
Dikantsoratra: Niova lalana nandalo an'i Iran ny ampahany maro amin'ny hafatra Telegram avy amin'izao tontolo izao
Nojirihan'ny TCI ny border gateway protocols, izay mitantana ny fomba fifindran'ny ‘data’ (lahatahiry) manerana ny aterineto. Tsy vitan'ny fanitsakitsahana ny Lalàna Famaizana ara-Solosaina ao Iran ihany izany fa manisy tombokase ny lazan'ny minisiteran'ny fifandraisandavitra ao Iran ho mpanitsakitsaka ny fahafahana ara-aterineto.
Ho famaliana izao hetsika izao, nisioka ny minisitry ny fifandraisandavitra ao Iran, Mohammad Javad Azari Jahromi, tamin'ny 30 Jolay, “Mifototra amin'ny tatitra azoko hatramin'izao, tanelanelan'ny tamin'ny 4 ka hatramin'ny 6 ora maraina tamin'ity 30 jolay ity, nanolo-tena hanova ny haihabaka ao aminy ny TCI ary nanamafy ny tambajotrany any [an-tanànan'i] Shiraz sy Bushehr.”
“Raha voamarina ny fahadisoan'ny TCI, na niniana na tsia, dia hanapika onitra mavesatra,” hoy izy nanampy. “Efa eo ambany fanadihadian'ny Fahefana Mpandamina ny Fifandraisana (CRA) ato amin'ny R.I. Iran ny raharaha.”
Tamin'ny fanakanana iraisampirenena ny fidirana amin'ny tranonkala ny TCI no nahavita nanao ankasomparana sy nisovoka ho ao amin'ny tambajotra izay manitsakitsaka ny andininy 736 sy 737 amin'ny lalàna Famaizana ara-Solosaina, heloka bevava mety hampigadra hatramin'ny roa taona sy onitra faratampony 40 tapitrisa rials (tokotokony ho $906 amerikana).
Famotopotorana fanampiny avy amin'ny CHRI
Fikarohana nataon'ny CHRI ihany koa no nampiseho fa tamin'ny 17 jolay 2018, dia niezaka hanakana eo amin'ny sehatra iraisampirenena ireo tranonkala ao amin'ny firenena voarara amin'ny alalan'ny fanaovana ankasomparana sy fitsabatsabahana ny zotran'ny data (lahatahiry) i Iran, izay efa fanitsakitsahana ny lalàna famaizana ara-solosaina ao aminy ihany.
Raha miezaka miditra ao amin'ny fileniko.com ny mpisera iray ivelan'i Iran, dia efa nampidiran'ny Telecommunication Infrastructure Company (TIC) kaody tao amin'io tranonkala io izay mamily lalana ny mpisera ho any amin'ny tranokala hafa, http://peyvandha.ir/, izay mampiseho ny lisitry ny tranonkala ampirisihan'ny manampahefana iraniana.
Tsy niseho intsony ny lisitra satria efa nesorin'ny manampahefana ny fanivanana ao amin'ny tranonkala.
Ny TIC no fahefana tompon'antoka tamin'izany hetsika izany, izay miasa ambany fahefan'ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra. Miasa eo ambany fahefan'ny filoha, izay manendry ny filohan'ny minisitra, ny minisitera rehetra ao Iran.
Mbola tsy fantatra hoe tranonkala firy ao Iran no lasa tsy azo nidirana tamin'ny alalan'ity fomba ity.
Pikantsarin'ny kaody nampidirina tao amin'ny tranonkalan'ny fileniko.com.
Nahoana no tsy mahomby ny fomba fanivanana BGP
Notanterahina latsaky ny roa volana nanakanan'i Iran ny fidirana ao amin'ny Telegram, noheverina hanamafisana ny fandraràna amin'ny alalan'ny familian-dalana ny fangatahana fidirana amin'ny lohamilina ao Iran izao hetsika izao. Efa nampiasain'ny governemantan'i Pakistan ity fomba fiasa ity tamin'ny Febroary 2008 raha nanitatra ny fanivanany tamin'ny lalan'ny BGP iraisampirenena izy ary namily lalana ny ankamaroan'ny zotran'ny YouTube ho any Pakistan.
Na dia mety hahomby vonjimaika aza ity fanivanana ity, dia mora fantarina ihany koa ary azon'ny routers iraisampirenena ahitsy ao anatin'ny roa na telo andro raha be indrindra.
Nanho hevitra i Kashfi: “Tsy araka izay mety ho eritreretin'ny vahoaka, fa mora atao ara-teknika ity fomba fanafihana ity. Ny marina dia fahadisoana iniana atao hanovana ny lalana ankapoben'ny mpanome tolotra aterineto (ISP=FAI) izy ity.”
Raha nanontaniana i Kashfi hoe tsinahy ve sa niniana izao nataon'i Iran izao, dia namaly izy, “Inian'ny governemanta atao izy ity dia vy eo ry zareo milaza fa tsinahy. Koa satria moa efa stratejika mihitsy ny hanakanana ny Telegram ao Iran, dia ho sarotra dia sarotra mihitsy ny hihevitra azy ho tsinahy.”